GloDroid 0.6.1 ikozvino inoita kuti iwe uise Android pane PineTab | Linux Vakapindwa muropa
Handina kutaura zvakanyanya nezvePineTab kwenguva yakareba. Ndakatenda uye ndaida kuti ive sekushandisa Linux pahwendefa, zvishoma zvishoma, asi zvinoshanda, uye hazvishande. Yakauya mumaoko angu munaGunyana 2020, Ubuntu Kubata hakushandise zvishoma, mamwe masisitimu anowanzo shandisa Phosh uye hazvigoneke kufamba pasina kutya. Chikwata che JingOS inoti PineTab haisi "mutyairi wezuva nezuva", kureva kuti, komputa inogona kushandiswa uye kuvimbwa nayo, asi zvinogona kudaro kana tikashandisa Android ruoko takabatana GloDroid.
Kana ndisina kutaura kuti yatove, imhaka yekuti haisati yave, asi zvinoita sekunge ichadaro. MunaGunyana-Gumiguru, iro GloDroid timu yekuvandudza yakaburitsa vhezheni yaifanirwa kushanda paPineTab, asi isu taifanira kuumbiridza uye kuyedza pachedu, uye usandibvunze kuti ndaziva sei kuti unoda komputa ine simba ine yakanaka hard drive .yedza. Iye zvino, zviripo kwemazuva mashanu, isu tatova nemifananidzo inowanikwa yekuisa Android 11 pane PineTab, asi pachine basa kumberi.
1 GloDroid ikozvino "inoonekwa" pane PineTab
2 Maitiro ekuisa iyo
3 GloDroid kuita uye SD slot, tariro yangu
GloDroid ikozvino "inoonekwa" pane PineTab
Iyo GloDroid vhezheni iyo inoshanda kare paPineTab iri 0.6.1. Iwe ungadai wakanditeerera ini apo, apo yaive ichiiswa, ini ndakavimbisa kuti iyo skrini yakavhurwa uye chimwe chinhu chaioneka. Ndave ndichifara zvikuru pandinoona iyo logo yeApple pahwendefa iyo yandinongo gadziridza Ubuntu Kubata kuti ndione mafambiro aro ari kufambira mberi. Dambudziko rave rekutanga kushandisa iyo system: kunyangwe hazvo izvo inoshanda zvakatsetseka, zvirinani zvichienzaniswa nechero vhezheni yeLinux nhare, haugone kuinzwa, saka ndakayeuka iyo bhaisikopo muchiSpanish inonzi "Usandipopotere, handisi kukuona", ndokuti ona chero chinhu nekuti ivo vaifanirwa kuti ini ndigadzirise mutyairi weiyo vhidhiyo, uye ikozvino zvavakaita izvo, iyo piritsi haina "kutaura".
Kumwe kukundikana kwakakomba pahwendefa ndechekuti hakuoni kuti tinoibata sei, ndiko kuti, izvo haingoerekana yaenda kune mufananidzo kana mamiriro. Ini handifunge zvakanyanya kana yakagadziriswa mumamiriro emamiriro ekunze, asi piritsi ratinongogona kushandisa takatwasuka harisi piritsi chairo, kana kwete rangu. Kana isu tichiisa mavhidhiyo, semuenzaniso, yakawanda skrini inotambiswa, saka haisiyo yakanyanya kunaka sarudzo.
Maitiro ekuisa iyo
Iwe unogona kuona iyo yekuisa maitiro muiyo yapfuura vhidhiyo:
Tinodhawunirodha iyo faira ine mifananidzo, parizvino iri Iyi link.
Isu tinosvinura kana isu hapana chatichaita.
Isu tinofanirwa kumisikidza adb, chimwe chinhu chinokurudzirwa kuti chiitwe muUbuntu kana mukugovera icho chinacho muzvinyorwa zvisipo. MuUbuntu, iwo mutemo sudo apt kuisa adb.
Ipapo, isu tinovhura terminal, nyora "cd" pasina makotesheni uye tinodhonza dura iro ratakaburitsa / kugadzira mudanho rechipiri.
Mune inotevera nhanho isu tinofanirwa kusarudza kwatinoda kuisa GloDroid. Iyo i "emmc" ndeyeyemukati memory. Imwe ndeyeye SD kadhi. Mufananidzo unofanirwa kupenyerwa uri deploy-sdX, iX iri sarudzo yakasarudzwa.
Isu tinoibhenekera pakadhi riine Etcher, semuenzaniso.
Muvhidhiyo inoti isa kadhi muPineTab / PinePhone uye wobatidza mudziyo, asi iri danho rinovhiringidza nekuti hapana chaunoona. Ini ndinokurudzira kuisa kadhi mumudziyo, uchiibatanidza nePC netambo uye kuenda padanho rinotevera.
Mune terminal, tinodhonza flash-X.sh, iko X ichave yekuenda ndangariro (eMMC kana SD). Tinodzvanya Enter.
Iye zvino iyo terminal haizoite chero chinhu kana ikasaona chero chinhu. Ndipo apo patinozodzvanya bhatani remagetsi ePineTab / PinePhone kwemasekondi mashoma.
Kana ichinge yazviona, inotikumbira kudzvanya Enter kuti titange maitiro. Tinomirira kuti ipedze.
Dzidziso yacho inoti kana yapera inotangazve uye iwe woona iyo Android logo, asi kwete muiyo yekutanga vhidhiyo kana mune yangu pachezvangu izvi zvakaitika. Tinogona kudzvanya bhatani rekuvhara kwechinguva kuti ritange nemazvo.
Kana isu tichiona iyo Android logo, isu tinomirira uye munguva pfupi inopinda.
GloDroid kuita uye SD slot, tariro yangu
Kana iri yehurongwa hwekushandisa, iri "isina" Android 11. Zvine zvakakwana chete, kune iyo inowedzerwa Firefox, F-Droid sechitoro cheapp uye SkyTube, yakavhurika sosi mutengi yeYouTube. Handinganyepe ndichiti ndakaita bvunzo dzakawanda, asi ndakave nemanzwiro akanaka kwazvo ekuti zvinofamba sei. Ichokwadi kuti haina mvura senge yangu iPad Pro, asi kekutanga mumwedzi mipfumbamwe ndakanzwa kuti yakanga iri piritsi uye kwete chidhinha chine zvimwe zvakanaka zvinoshandiswa seGIMP. Kuisa iyo GApps zvinoita kunge isiri basa mukati memunhu wese kusvika parizvino, asi muF-Droid, APKMirror uye Aptoide tinogona kuwana akawanda kana ese maapplication atingangoda pahwendefa.
Nezvo uye kuziva izvo mukati iyo PineTab inogona kumhanya chero inoenderana system kubva kune yayo SD slot, Maonero angu nezvehwendefa anogona kuchinja, asi nekuda kweizvozvo ivo vanofanirwa kuve nechokwadi chekuti GloDroid inonzwika uye inogona kuoneka yakatenderera. Ndinovimba vanozviwana.
Yakagadziridzwa nechinhu chinonakidza: Kana Kodi yakaiswa, kana iwe ukaivhura, inotendeuka yakatwasuka. Haisi iyo inonyanya kukosha, asi, neiyi, ini ndinongosuwa ruzha chete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GloDroid 0.6.1 yatobvumira Android kuti iiswe paPineTab, asi iine zvikanganiso zviviri zvakakosha